Waqtiga la dooranayo Gudoonka Baarlamaanka oo la shaaciyay iyo Gudoomiye KMG ah oo hada lagu dhawaaqay - iftineducation.com
aadan21 / August 20, 2012
iftineducation.com – Baarlamaanka Soomaaliya ayaa galabta kulankii ugu horeeyay u fadhiistay iyadoona la dhaariyay Xubnaha Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya ee kamidka Noqonaya oo tiradooda gaareysay 211-Xildhibaan oo goob jog ahaa.
Dhaarinta kadib ayaana Baarlamaanka Soomaaliya sida Sharciga iyo Dastuurka dhigayo waxaa loo magacaabay Gudoomiye KMG ah si uu usii shir gudoomiyo inta laga dooranayo Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo kuxigeenadiisa.
Baarlamaanka ayaana Gudoon KMG ah wax ay u garteen ninka ugu Da’da weyn oo ahaa Gen. Muuse Xassan oo Da’diisa tahay 72-Sano jir isagoona Si KMG ah u shirgudoomin doono Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya.
Gen. Muuse Xassan ayaa sheegay in Baarlamaanka beri kulmi doonan kuna kulmi doonaan 12-Duhurnimo Xarunta Xalane ,waxa uuna intaa ku daray waxii beri kadambeeya ay qaban doonaan ajaarijida Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen.
Qabashada araajida ayaana la sheegay in ay ku egtaya 25-ka Bishan iyadoona 26-ka la shaaciyay in ay dhici doonto Doorsahada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa kuxigeen.
Si kastaba Shirkii ugu horeeyay ay galab dhicii Maanta yeesheen Baarlamaanka Soomaaliya ee rasmiga ah kana gudbay KMG ayaa soo dhamaaday waxaana la filaya ain kulanka kale uu beri furmo.
Mid kamid ah Fanaaniinta ugu weyn uguna Caansan Soomaaliya oo kamid noqotay Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya